Wararkii ugu danbeeyay shirka madaxda dowlad gobolleedyada ee ka socda Baydhabo – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa ka soconaya shir halkaa maanta uga furmay madaxweynayaasha dowlad gobolleedyada Soomaaliya.
Kulanka ugu horeyn waxaa furay Madaxweynaha dowlad goboleedka Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana shir-guddoonka ah shirka la wareegay Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland C/weli Gaas oo ah Guddoomiyaha Golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.
Wararku waxaa ay sheegayaan in guddiyo farsamo oo ka kala socda dowlad gobolleedayda xiligan u fadhiyaan diyaarinta war murtiyeedka laga soo saarayo shirka iyo qodobada ay sida gaarka ah u taabanayaan.
Shirka ayaa imanay xili uu jiro khilaaf mar kale ka dhax oogan dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad gobolleedyada ku shirsan Baydhabo.
← Dowladda China oo lacag dhan $ 1.5 Million oo dollar ugu deeqday dadka ay fatahaaddu ku dhufatay
Taliska Booliska ku sugan deegaaanda Hirshabeele oo howlgalo amaanka wax looga qabanayo sameeyay →